Factorylọ ọrụ China Acoustic Panel na ndị na-emepụta | Huasheng
Eraser nwere mmetụta
Okpokoro siri ike / nsogbu
polyester agba nwere mmetụta
Akụrụngwa chere ya
Viscose nwere mmetụta
PP nwere mmetụta
Polyamide nwere mmetụta
Okpomoku di anya
Ihe ahụ mere ka ọ dị ya n'obi
Nhicha obi nwere akwa
Tenis bọl chere
Wool nwere mmetụta
enwe ajị anụ ahụ
Ọkpụkpụ gbachapụrụ agbacha ji
ajị anụ ngwaahịa
ajị chere wheel
akara akara & gasket
eriri enweghi mmetụta na-enweghị ngwụcha
bọọlụ ajị anụ
nka mmetụta ngwaahịa
chere placemats & coasters
chere pensụl ikpe
mgbochi esetịpụrụ mmetụta
e biri ebi nwere
onwe nrapado mmetụta
mgbochi odide chere
carbon carbon emebiri
Carbon Felt gbakwunyere na PAN
na-agụ abụ chere
Ibu ibu:1300g / m2-3500g / m2
Nkọwa ọkọlọtọ:1220mm (obosara) × 2420 (ogologo) × (3-25) (ọkpụrụkpụ) mm
Agba: Chart agba ma ọ bụ ahaziri ya
Ngwakọta: 100% eriri polyester (PET)
A na-eme panini Acoustic site na 100% PET, site na iji agịga agịga. Usoro mmepụta ahụ bụ nke anụ ahụ & nke gburugburu, enweghị mmiri mkpofu, mmiri na-anyụ, mkpofu, enweghị mgbakwunye.Our polyester fiber Acoustic Panels na-erite uru site n'ọtụtụ uru, ha na-enweta ụda a na-eme, na-enye njikwa akwara iji belata ọnụ ọgụgụ ụzụ na ime ụlọ.
PET acoustic panes Anyị na-egbu egbu, nke na-abụghị nke allergenic, na-enweghị mgbakasị ahụ ma ghara inwe ihe mgbochi formaldehyde ma nwee NRC dị elu: 0.85.100% polyester acoustic pan na-eme nke igwe na-ekpo ọkụ dị elu ma na-egosi ya site na ụdị cocoon owu udi .Ọ nwere ike mezuo ụdị njupụta dị iche iche wee hụ na ikuku iku ume. O nwere ọtụtụ uru, cochọ Mma, Insulation, azụ na-ere ọkụ, nchekwa gburugburu ebe obibi, ibu dị mfe, ịhazi ya, Stable, Resact Impact, Easy guarantee.etc.
O kwesịrị ekwesị maka ọfịs, ọnụ ụlọ ọgbakọ, ụlọ nzukọ, KTV, ime ụlọ ihe ngosi, ama egwuregwu, ụlọ nkwari akụ. N'ihi ọtụtụ uru na atụmatụ ya, a na-eji ya ebe niile na -ekwusi ụda ike.
Polyester Fiber Acoustic Panel bụ ihe eji achọ mma nke nwere ike ịkpụzi, kọọ, bee ma ebipụta ya.
Emebere ya maka ihe dị na azụmahịa:
* dị ka pinnable nnọchi obubọk nke akwa kpuchie taịl nile na sistemụ arụmọrụ
* iji nye mgbidi ahịrịaja, mgbanwe, na nke ga-agbanwe ọzọ
* sistemụ okuko
* dochie anya maka akwa taịl nile na ngwa eji eme ala.
Polyester Fiber Acoustic Panel dị mma iji nye ihe dị mma ma nwee mmetụta dị ka ụzọ edozi maka ọnọdụ mgbidi ọ bụla. Ọ na - enye ọ bụghị naanị nke nwere agba mara mma dị ka ọ gwụcha mana ọ na - enwekwa uru ancoustic nke ọma.
Polyester Fiber Acoustic Panel bụ ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke MDF ma ọ bụ plasterboard nha nha. Ọ bụ ngwaahịa a rụchara arụcha, nke nwere ike, ọ dị warara ma enwere ike iji ya dị ka akụkụ ihu abụọ ma ọ bụ otu akụkụ, na-enye ya uru dị mma nke itinye aka na sistemụ sliming ma chọrọ obere obere iji nagide ibu ya dị mfe.
1> Ihe mkpuchi ihe ngwa ngwa polyester fiber acoustic panel nwere njupụta dị elu, nchedo gburugburu, ọkụ na-agba ọkụ, ụda olu na-adịkarị obosara, mma dị mma, ịkpụ na ntinye, enweghị mmetọ ájá wdg.
2> Agba di iche na imecha ya nwere ike imeju ihe nile onye ahia ya choro.
3> Kachasị mma ịgbanyụ ọkụ nwere ike iru ogo B1 (GB), ma kacha mma nchekwa gburugburu ebe obibi nwere ike iru ọkwa E1 (GB).
4> Maka mkpa nke ndị ahịa anyị, anyị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ niile dị mkpa maka mbupụ na mbubata, dị ka akụkọ mkpocha ọkụ, akụkọ gburugburu, akụkọ na-anabata ụda na akụkọ nyocha SGS wdg.
Formancerụ Ọrụ Dị Elu - Mbelata Mbelata Noise
Emere site na ihe 100% arụgharị arụgharị
Ibu dị Mfe, Na-agbanwe agbanwe & Dị mfe Nhazi
Nwụnye na Mmezi Mfe
Nguzogide Elu Ala, Mmiri & Chemicals
Anaghị enyere aka ịgbasa ọkụ
Nchekwa niile - anaghị akpata mgbakasị ahụ ma ọ bụ nfụkasị ọ bụla
Mutiplex / aterlọ ihe nkiri
Thelọ ihe nkiri ụlọ
Teleconferencing na Videoconferencing omslọ
Ime Ulo Onu Nke Abụọ
Offlọ ọrụ ụlọ ọrụ na ndị ọzọ.
Nke gara aga: Onye na agba oso
Osote: Felt pouch (obi enyo enyo enyo)